မော်ဒယ်နံပါတ်. 102EB-90 စစ်ထုတ်သည် 1pc baffle filter
ပြီးပြီ အစွန်းခံသံမဏိ 430 ရေနံစုဆောင်း အစွန်းခံသံမဏိ
လေစီးကြောင်း 750m3 / h မှုတ်တံ Metal Blower
Rated input power 234W အလိုအလျောက်သန့်ရှင်းရေး Heat Auto-clean
ထိန်းချုပ်မှု3Speed Touch Control with motion sensor ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား (W *: D * H ကို) 945*550*505မီလီမီတာ
မီးအိမ် 2x1.5W LED QTY တင်နေသည် (20မိသားစုဆရာဝန် / 40HQ) 96pcs/250pcs
ပို့ခြင်း & ဝန်ဆောင်မှု အချိန်မီအချိန်မီပေးပို့ခြင်း. ယုံကြည်စိတ်ချရသော ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးပြီးကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုစီနှင့်ဖောက်သည်တစ် ဦး စီအတွက်တာ ၀ န်ရှိသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာဖောက်သည်တိုင်းကိုအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုဖြင့်ကျေနပ်စေရန်ဖြစ်သည်.
သင့်တွင်ပြproblemsနာအချို့ရှိပါက 102EB-90 New T-shape range hood with slope design 90cm, သို့မဟုတ် T Shape Range Hood အကြောင်းအသေးစိတ်သိလိုပါက,ဒေါင်လိုက် Range hood ကို,အစိုးရအဖွဲ့စီးရီးလက်အောက်တွင်,Tablet Gas Hob စီးရီး,အလွန်ပါးလွှာသော Gas Hob စီးရီး,စသည်တို့. ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ!
အမှတ်အသားများ (Tags)：Range hood ကို
103T60-T ကွေးပုံသဏ္glassာန်ဖန်ထည်သည်မြင့်သောစုတ်ယူခြင်းအကွာအဝေး ၆၀ စင်တီမီတာ
108X60 ဒေါင်လိုက်စီးရီး Range ပါးပျဉ်း 60cm